SAN ANTONIO မှလူများသာနားလည်ကြလိမ့်မည် - နှုန်းထားများ
San Antonio မှလူများသာနားလည်ကြလိမ့်မည်
San Antonio တွင်ကျွန်ုပ်တို့နည်းနည်းလေးကွဲပြားစွာလုပ်ဆောင်ပါသည်။ သင်ဤနေရာမှမဟုတ်လျှင်သင်ဘယ်တော့မျှနားလည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Life သည် SA သည်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိမည်သည့်နေရာနှင့်မျှမတူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာဖြင့်ဖော်ပြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်မြတ်နိုးသော Countdown City ကိုဂုဏ်ပြုသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည် SA မှလူများသာသိသောအရာများကိုတိတိကျကျစာရင်းပြုစုထားပါသည်။
တစ် ဦး စပါးအနိုင်ရပြီးနောက်စစ်ရေး Drive ကိုဆင်း honking Going
သငျသညျ honking သွားနေမဟုတ်လျှင်တစ်စပါးအနိုင်ရပြီးနောက်မြို့လယ်သို့မဟုတ်စစ်တပ်အပေါ်မောင်းထုတ်ရန်ကြိုးစားနေစဉ်းစားမထားပါနဲ့
သင့်ရဲ့ NIOSA ဘီယာခွက်များကိုပုံထားခြင်း
သင့်ကလေးကအောင်စဘယ်လောက်ရသလဲလို့မေးပြီး 'အဲဒါက niosa ခွက်ထက်အနည်းငယ်ပိုပါတယ်' လို့ပြောရင်သူတို့ရတယ်။ ❤️
- Pure San Antonio (@PuroSanAntonio) အောက်တိုဘာ 15, 2016
ထို့အပြင်အတိတ်က Fiesta ပါတီသည်ယခင်နှစ်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
Spurs Jesus နှင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်ကြိုးစားခြင်း
စိန့်အန်တိုနီဟိုတယ်၌တစ်ခုတည်းသော #spursjesus # sj4usa #rooftop #rooftoppioneers #afterparty #fundraiser 8-2am #cityofsanantonio #sanantonio ကိုထောက်ပံ့ရန်အတွက်နောက်ထပ်ဖြစ်ရပ်
၂၀၁၆ အောက်တိုဘာ ၇ ရက်ညနေ ၄း၂၇ PDT တွင် Ramiro Russell (@ r2facts) မှတင်ပြသောဓာတ်ပုံ
La Villita မှတစ်ဆင့်သင်၏ဘုရင်ခံပန်းပွင့်သရဖူကိုဝတ်ဆင်ခြင်း
သငျသညျ napping သို့မဟုတ်ပါတီလား?! ??? #NIOSA # ပါတီ
Melody Ramos တင်သောပုံ။ 9:41 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 22, 2016 တွင် (@melgraceram)
၎င်းသည်စပါး၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးယခုတွင်ဘွဲ့ရခြင်းနှင့် UTSA ဂိမ်းများအတွက်သာဖြစ်သည်
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်၊ နံနက် ၁၁:၃၇ အချိန်တွင် Gretchen Bee Ranch (@gretchenbeeranch) မှတင်ပြသောဓာတ်ပုံ။
အနည်းဆုံး Quinces ပထမနှစ်ပထမနှစ်တွင်ရပ်နေသည်
Brackenridge ပန်းခြံမှာ Cookouts
Obvs လည်း duck ကျွေးမွေးဖို့ပေါင်မုန့်တလျှောက်ယူဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
Spurs အနိုင်ရရှိပြီးနောက် Valero ၌ကော်ဖီသောက်ခြင်း
စပါးများအနိုင်ရသောအခါ Valero ကကော်ဖီအခမဲ့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောအရာကသတ်မှတ်ချက်များအရအခမဲ့အရက်ကိုပေးနိုင်သလား။ ?
- Jeremy Kunchandy (@JeremyKunchandy) ၂၀၁၆ မေလ ၁၃ ရက်
Xavier အဆိုပါ Freakin '' Rican နှင့် Biggie ရှင်ပေါလု #neverforget များအတွက်တရားမျှတမှု
Tamales အတန်းသို့မည်သူပို့ဆောင်ရမည်ကိုမည်သူဂုဏ်ပြုမည်ဆိုသည်ကိုစားရန်အတွက် sign-up စာရွက်ပေါ်တွင်အမြဲတမ်းရန်ဖြစ်လေ့ရှိသည်
အဆိုပါကောင်ဘွိုင် - နှင့်ပွဲတော် - ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်
B? O? O? T? S #sanantoniorodeo #family #cuadra
Marlen Montes (@c_marlen) မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်၊ ညနေ ၃း၃၅ တွင် PST တွင်တင်ထားသောဓာတ်ပုံ
ကျောင်းမှာနှစ်စဉ် Selena ကိုကြည့်နေတယ်
ပါတီများနှင့်ခရီးများမတိုင်မီပစ္စည်းများအတွက် HEB ကိုနှိပ်ခြင်း
Corona နှင့်အတူ styrofo အအေးခံစက်တစ်လုံးအားဖွင့်ခြင်းသည်ပါတီပွဲများသို့မတက်မီသို့မဟုတ်ပါဒါးကျွန်းသို့မသွားမီသင်၏ပထမဆုံးမှတ်တိုင်ဖြစ်သည်
Barbacoa နှင့် Big Red တို့သည်သင်၏တနင်္ဂနွေနေ့၏အရေးအကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်
San Antonio ပျောက်နေတုန်းမှာဘာဘာပိုနဲ့အနီရောင်ထက်ပိုကောင်းတဲ့အစာရှိသလား။ pic.twitter.com/VxtF66UbaT
- aBOOgail (@abbiefriedrich) ဖေဖော်ဝါရီလ 22, 2015
Danza Kuduro သည်လုပ်ဆောင်မှုတိုင်းနှင့်စားသောက်ဆိုင်တွင်လာသည်
Danza Kuduro ကလူဖြူတွေကိုသူတို့ကတတ်နိုင်တယ်လို့ထင်စေတယ်
- Vanilla (@_VanessaDeanna) အောက်တိုဘာ 14, 2016
Rivercenter ရှိ IMAX တွင်ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခြင်းအားသင်ကွင်းဆင်း။ သတိရသည့်အခါ San Antonio မှသင်သိသည်။
- gracy (@hashtag_gracy) မေလ ၂၆ ရက်၊
Neon Moon သည်ကျောင်းအကတိုင်းတွင်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ကစားခဲ့သည်
ထို DJ သည်အမြဲတမ်းတစ်ခုတည်းသောနှေးကွေးသောသီချင်းဖြစ်သည်
- မာသာမူနို့စ် (@marthaha_munoz) ဖေဖော်ဝါရီလ 1, 2016
Joe ၏မီးတောင်ရေဒီယိုကြော်ငြာများကိုသင်နှစ်သက်သည် - ME ME TOOOO ... THE VOLCANO-CANO
အသက် ၁၂ နှစ်မှာဂရေဟမ်ဗဟိုဘူတာရုံ၊ ကလပ်ရီယိုနဲ့ဂျိုးရဲ့မီးတောင်စတဲ့ San Antonio ကလပ်အသင်းတွေနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေခဲ့တာပါ။ ၉၈.၅
ကောင်းဘွိုင်ရဲ့အကခန်းမတစ်ခု Boo ကြိုးစားတွေ့ဆုံရန်နေရာဖြစ်ခဲ့သည်
အစဉ်အဆက်အကောင်းဆုံးတိုင်းပြည်ကခုန် / ဘဝမိတ်ဖက်လား☺️
Lauren Howland တင်သောပုံ။ 9:41 pm တွင် PDT မှာအောက်တိုဘာလ 8, 2016 ရက်တွင် (lauren.howland @)
San Antonio ၏မြစ်လမ်းလျှောက်။ ကျော်ကြားသောဆိုဒ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကုန်တိုက်များနှင့်စတိုးဆိုင်များနှင့်မြေအောက်ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။ #sanantonioriverwalk #sanantonio #riverwalk #riverwalksanantonio # ခရီးသွား ites ည့်
ဂေါ်ဒွန်ချောင် (@ gordon0624) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်ည ၈း၅၇ တွင်တင်ခဲ့သည်
Spurs HEB ကြော်ငြာအသစ်များအတွက်ရာသီတစ်ခုစီကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည်
Sneak peek: ငါတို့ရဲ့ကြော်ငြာအသစ်တွေမှာ၊ @spurs ဒဏ္ာရီဖိတ်ကြား #TimDuncan လျှို့ဝှက်အငြိမ်းစားကလပ်သို့။ အဆိုပါစပါးအိမ်ပြန်ဖွင့်လှစ်နေစဉ်အတွင်းသူတို့ကိုဖမ်း! pic.twitter.com/X9cww4BPKc
- H-E-B (@HEB) အောက်တိုဘာ 12, 2016
98.5 Heartbeats တွင် Bexar ကောင်တီအကျဉ်းထောင်မှကြားနာသူများအားလုံးနားထောင်သည်
ထောင်ချခံခဲ့ရသောအမျိုးသားတစ် ဦး သည် ၉၈.၅ မှ Heartbeats ဟုခေါ်သောသူအားမိမိကိုယ်ကို“ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိ” bcz အားအော်ဟစ်ရန်အတွက် Heartbeats ဟုခေါ်ခဲ့သည်။ နှောင့်အယှက်!?!
- ကာရာန် စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၁
HS ဘောလုံးပွဲပြီးနောက် Whataburger တွင်တိုက်ပွဲများနှင့်စကားပြောနေခြင်း
အဆိုပါ chancla ကြောက်ရွံ့ခြင်း၌အသကျရှငျ
သူတို့ကမော်ဒန်ဖြစ်ရန် chancla နှင့်အတူဟစ်စပန်းနစ် mama လိုအပ်သည် # Debates2016
- Eddy Luna (@ ReadyEddy57) အောက်တိုဘာလ 20, 2016
ဇာတ်လမ်းအတော်များများကမြည်းမလေးဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်၊ ဘယ်လိုအစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာတာလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတယ်။ ဇာတ်လမ်းအချို့ကသူမသည်သူမ၏ခင်ပွန်း၏မီးကြောင့်ကလေးများဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သူမသည်မီးထဲတွင်အလွန်ပုံပျက်နေပြီးခြေချောင်းများနှင့်လက်များကိုအတူတကွလက်ချောင်းများနှင့်ခြေချောင်းများပေါင်းစပ်ထားသည်။ သူ၏ခေါင်းကိုမီးဖြင့်ပြင်းစွာလောင်ကျွမ်းခဲ့သဖြင့်၎င်းသည်ယိုယွင်း။ ရှည်လျားသောလမ်းဖြင့်အနာရောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီးမြည်းနှင့်တူသည်။ သူမသည် San Antonio တောင်ပိုင်းရှိတံတားပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ညအချိန်တွင်သူမကလေးများအတွက်ငိုနေသည်။ သူမသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သူမကိုနှောင့်ယှက်ခြင်းဖြင့်သူ့ကိုနှောင့်ယှက်မည်။ ကားချိုတစ်ချောင်းကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းသည်ဤတောင့်တင်းသောမြည်းမ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ မင်္ဂလာဟယ်လိုဝင်း!
အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်၊ ညနေ ၃:၂၆ ၌ @ krich1969 မှတင်သောဓာတ်ပုံ
တစ်နည်းနည်းနဲ့ကြောင်းသိ, လူတိုင်းတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားသိတယ်
လူအများစုကရူးသွပ်စွာ #niosa #downtownsanantonio #vivafiesta #fiestasa
Antonioပြီလ ၂၁ ရက်၊ ညနေ ၅း၄၈ တွင် Downtown San Antonio (@downtownsanantonio) မှတင်ပြသောဓာတ်ပုံ။